गफ ! .....: दुई गजलहरु : बत्ति बाल्ने नै भए र बाटो उनलाई
दुई गजलहरु : बत्ति बाल्ने नै भए र बाटो उनलाई
गजलमा ओर्लेकै त हुँ , म त कोर्दैछु मनपरी गजलहरु । यसपटक पहिलो नेपालमै छँदा लेखेको गजललाई सम्झी सम्झी पुनर्लेखन गरेको हुँ भने दोश्रो नयाँ नै हो । दिक्क नमान्नुस् है एकोहोरो गजल कोच्यायो भनेर अझै तिनचार वटा (केहि बन्दै गरेका केहि बनेका ) लाईनमा छन् तर तिन्लाई भने अलि अन्तर पारेर मात्रै राख्छु ।
बाबा ! यिन्ले त बत्ति बाल्ने नै भए ।
जात गुन्द्रुक् कै झोल् मा फाल्ने नै भए ।
भन्नै आफुलाई पंकीरेगी भन्छन् ,
नयाँ लुगा काटेर टाल्ने नै भए ।
ऐना के हेर्लान् मन्मा हमाल जो छ ,
अनि त जुल्फि लामो पाल्ने नै भए ।
भन्दै जिन्दगीको मजा बेग्लै हुन्छ ,
दिउँसै नशा तान्न थाल्ने नै भए ।
सिन्को नभाँचे नि यिनै हुन्छन् लाडे ,
आमा बालाई तब दाल्ने नै भए ।
सम्झाउनेलाई जातै मुन्द्रे परे ,
ठाम् को ठाम् मुक्का हानी ढाल्ने नै भए ।
( उ बेला नेपालमा बत्ति बालेर भन्ने थेगो चलेको थियो भने नेपाली फिल्ममा चैं बनको बनमारा झैं राजेश हमालको कपाल चलेको थियो )
गन्हायो रे म हिँडेकै बाटो उनलाई ।
भएँ रे म आजभोली लाटो उनलाई ।
नटेक्नु रे भुईँ पनि बस्नु रे आकाश् मा ,
मैलो लाग्ने छुँदैखेरी माटो उनलाई ।
अन्न उहि पेट भर्ने खाने रोटो उहि ,
नाक लाग्ने मैले खाने आटो उनलाई ।
बाँचेकै छु म नि सञ्चै नै छन् उनि पनि ,
फापेकै छ हामी बिच् को फाटो उनलाई ।
संसार् आफ्नै आफ्नै छुट्टै भेट्दा अझै पनि ,
आँखा तर्दै फेर्नुपर्ने साटो उनलाई ।
माया हो कि के हो अझै दुख्नै मजा लाग्ने ,
बल्झाउँछु सम्झी घाव् को खाटो उनलाई ।
Posted by दीपक जडित at 2:58 AM
गीत ,गजल र कविता तथा समझनाहरु ब्लगमा राख्ने नै भए ।
माया ममता आफ्नो टासो संगै साट्ने भए ।
यी गजलहरु संगै आउने
बाटो उनलाई -
टासोहरु संगै का फाटोहरु उनलाई ....दीपक जी लाई ।
काजी सा'ब का कुरै तेस्रा
नबुझेर कोर्न बसे खेस्रा
निहु खोज्न असाध्यै जान्या
आ फ्ना कुरा ठुला नै मन्या
सुझाब लाई गाली ठान्या
सिधा लाई बङाइ बोल्या
रङ्ग मा बेरङ्ग घोल्या
काजी सा'ब ! किन यस्तो चर्ती !
मान्नु पर्छ घरती को पनि अर्ती
काजी सा'ब लाई जित्नै प र् या
उन्कै कु रा बलिया ठ र् या !
रमाईला गजल लागे दुईवटै दीपक दाइ !!!!!
"आमा बालाई तब दाल्ने नै भए ।"
मैले यो हरफ अलि बुझिनँ ।
शब्द सम्योजन बेजोडकाछन। गजलको बिचार पक्षलाई हेर्दा अभिब्यक्ती,उक्तिउपमा र शब्द प्रयोग अतिनै राम्राछन। सफलताको लागि शुभकामना।
सटीक शब्द-संयोजन छन् दीपकजी! गज्जब लाग्यो!
धन्यवाद ! प्रतिक्रिया गरिदिनुहुने सबैजनालाई ।
लुनाजी , मेरो अनुमानमा दोश्रो गजलको पहिलो शेरको कारणले यो प्रतिक्रिया लेख्नुभएको जस्तो लाग्यो यदि हो भने जस्तो बुझ्नुभयो वा अर्थ्याउनुभयो त्यसो हैन है । अनि उजेलीजी , दाल्नु भनेको नबुझ्नु भएको हो कि ? दाल्नु एकप्रकारले घुर्क्याउनु हो । घुर्क्याईको उच्चतम रुप हो भन्छु म त ।
पहिलो गजलभन्दा दोस्रो नै मन पर्‍यो । सायद रचनात्मक समयको नयाँपनले होला । तर त्यतिले मात्र त होइन, दोस्रो गजल अलि गहन पनि छ । सम्बन्धको मामिलामा पनि वर्गभेदको कुराले अठ्याङ पारेको मुद्दा सबल तरीकाले उठाउनुभएको छ । कलकलाउँदो काया र सङ्घर्षको यात्रामा धुस्रेफुस्रे भएको ज्यानबीच आजको समयमा 'एकीकरण' कहाँ पो हुन सक्छ र !
वर्णविन्यासगत हिसाबमा, मात्रासँगै गेयात्मक पक्ष मिलाउने ध्याउन्नमा हलन्त नहुने वर्णलाई समेत हलन्त पार्नुभएकोमा अलि बिझायो । मात्रा मिल्छ भने र उच्चारणमा हलन्त देखिए पनि (जस्तै कथ्य रूपमा 'भात्' भए पनि हाम्रो वर्णविन्यासको नियमले लेख्य रूपमा 'भात' नै चलाएको छ ।) लेखाइमा त त्यस्तो टड्कारै बिझ्ने गरी हलन्त नबनाएकै राम्रो होइन र ? त्यसो त लयात्मकतामा सम्झौता गर्ने कुरा मैले गरेको होइन । तर सकभर चलनचल्तीका पूरा अक्षरलाई नभाँचीकनै लेख्‍नु न्यायसङ्गत होला । घाउ (संस्कृत घात) को ठाउँमा पनि 'घाव्' राख्‍नुभएको रहेछ । हेर्दै अलि मिलेन । अन्यथा लिनुहुने छैन ।
हार्दिक धन्यवाद गजलमाथीको टिप्पणीको निमित्त । वास्तवमा साहित्यमा के कसरी लेखिने भन्ने लेख्य नियमको निमित्त म अज्ञानी नै छु । यस गजलमा पनि मैले एक हिसाबले प्रयोग राखेको हुँ - मैले बुझेसम्म सममात्रामा गजल लेखिँदा अक्षर बराबरी नहुँदा पनि उच्चारणले बराबर मानेर मिसरामा गन्तीमा कमबेसी अक्षरहरु राख्न पाईन्छ क्यारे , त्यस हिसाबले हेर्दा मैले अलि मिचेरै लेखेको हुँ । तर यो गजल लेख्दै गर्दा आधा लेख्न मन लागेका केहि अक्षरहरुलाई आधा नै लेख्ने कोसिस गर्न मलाई मोतिराम भट्टको गजल
इनै सुन्दरीले जुलुम् गर्न लागे
भन्ने गजलले यो उपध्रो गर्न प्रेरित गरेको हो है । यसो नगर्दा नि हुन्थ्यो भन्ने लाग्या त हो ।
यो गजलमा अक्षर भाँचिएको कुरालाई लिएर अरुपनि टिप्पणीको अपेक्षा गरेको थिएँ मैले उता गजल ग्रुपमा पनि तर यहाँ कस्लाई फुर्सद छ र ? कस्ले के कसरी लेख्दैछ भनेर चियो गर्नलाई । तपाईंको टिप्पणीको निमित्त पुन हार्दिक धन्यवाद ! यस्लाई मैले अन्यथा लिने भन्ने त कुरै आ उँदैन बरु म त नियमित यस्तै छलफलमा जुट्न पाए हुन्थ्यो पो भन्छु ।
That's very nice thought Jaditji.
मतला बिहिन गजल : जिउँदै रहेछ
गीत : तिमीलाई हँसाएको पल
गजल : शँख एकोहोरो फेरी
कथा : थप्पडी
गीत , तिमी र म
गजल : अक्मकायो बरा !
शिर्षक चैं के राख्नेहोला ? : ब्लगसँगको मितेरीमा ३०...
गजल : निभाएछन् आज
म हाँसेको कुरा - भाग ३
गजल : घेर्नु अरे
कविता : समयसँग तिमी हामी